Ifama Efihliweyo eBangalore - I-Airbnb
Ifama Efihliweyo eBangalore
Ifama sinombuki zindwendwe onguVishal
IFAMA EFIHLAKELEYO iHOUSE-indawo yakho efanelekileyo yokungena ngempela-veki, amagumbi okulala ayi-2 anegumbi lokuhlambela eliyi-1 kunye negumbi lokuhlambela eliyi-1 elisetyenziswa ngumntu wonke. .Igumbi lokuhlala eliqaqambileyo elinegumbi lokuhlamba elidibeneyo. Kukho umculo we-Lluetooth. Indawo Yengca enendawo yokupaka yabucala yeemoto eziyi-5. Imidlalo yangaphakathi efana neCarrom, iChess, iLudo, iinyoka kunye neLadders, i-Uno, amakhadi okudlala, njl.
Imidlalo yangaphandle efana neBadminton kunye nebhola yokuphosa iyafumaneka. Inethiwekhi entle efumanekayo kunye nezibane ezingxamisekileyo kunye neetotshi ezifumanekayo ezincinci zeFama ngabantu abayi-6.
Ukufumaneka kokuhlolwa kweemuvi phantsi kweenkwenkwezi kunye nezinye iiPopcorn nazo ziyafumaneka ngokusekelwe kwiindleko ezongezelelweyo.
Ukufumaneka kweBonfire nako kuyafumaneka ngokusekelwe kwiindleko ezongezelelweyo.
(Ukuze wazi ngakumbi ngeprojekta kunye neBonfire checkout izinto eziphambili eBio)
Ukutya kunoku-odola kwi-Swiggy/e-Zomato.
Iti /Ikofu iza kufumaneka
kwiFarmHouse I-induction cooker iyafumaneka kwakhona ukuze kuphekwe izinto zokutya ezifana ne-Maggie njl Imithetho ye-GarmHouse-
• Ubungqina besazisi sokuqala belungu eliyi-1 obuza kufakwa ngexesha lokufika. • Umculo oza kudlalwa ngobuninzi obuphakathi kuphela emva ko-10:00 ebusuku.
•Nawuphi na umonakalo kwindlu kufuneka ubhatalwe ngumxhasi ngexesha elinye.
• Izilwanyana zasekhaya azivumelekanga ngaphakathi
kwiFarmHouse • Abantwana kufuneka bajongwe ngaphakathi nakwiindawo ezingqonge indlu.
\_u00A0Iibhedi ezinkulu eziyi-2, iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-4
4.43 · Izimvo eziyi-28
I am a student and an entrepreneur from Bangalore. This is a property which is owned by family and me , we are looking forward to host you and offer an unforgettable experience. You can follow us on IG @thehiddenfarmhouse